kosha Matambudziko makuru
1 gore 2 ago #969 by Dariussssss
Ndiine zvishomanana paywares.ALL dzisina kukwana ndege mumaFSX yangu dzakaputsika. Hapana radio uye hapana GPS .....
Munguva pfupi yapfuura akadzosera chinhu chose ... hapana nzira yandinozoita zvakare. Saka, pane nzira ipi yekugadzirisa nayo, uye chii icho hero ichocho? Chii chakashata nazvo?
1 gore 2 ago #970 by DRCW
Hausi kungochida, ndakafanirwa kuita zvakafanana pane dzimwe nguva. Chinhu chekutanga ndechokugadzirisa software iyo inogona kunge ichiita. Chinhu chinotevera ndechokubvisa main FSX cfg, uye wozotangazve FSX, inotora nzvimbo cfg neyo itsva, sezvaiyo pawakatanga kutora FSX. Yese yako yakakodzwa software icharamba iripo. Asi iwe unofanirwa kubvuma majiji zvakare.
1 gore 2 ago - 1 gore 2 ago #984 by DRCW
Ndingadai ndakawedzera kuti imwe yemapurogiramu ekubhadhara iwe waunowedzera inokonzera kukonzera mafaira akagoverwa mukati meFSX kuti asvibiswe. Kubva pakutsanangurwa kwako, zvinogona kunge zviri mujiji faira. Iyo payware yakaita nenzira yakati, yakashatisa radhi redhi uye GPS mafaira. Ndinotarisira kuti haufaniri kutanga zvakare, asi kana iwe ndichingoisa mu thread kune avo vanozviita uri muFSX chikamu. Ndinovimba iyo inobatsira
Last edit: 1 gore 2 mwedzi yapfuura DRCW.
1 gore 2 ago #990 by Dariussssss
Zvinhu zvinonakidza ndizvo, zvinoshanda. Apo ini ndinotakura ndege dzisina kukwana, ivo vose vari vaviri vaenda.
Mushure mokunge ndasimuka, ndinoona kubvumirwa kweAATC nezvimwe ... iyo inodzoka, zvose zviri zviviri. Pretty damn weird. Ndinofunga kuti PMDG 747 yaiitungamirira. Yakabviswa ikozvino saka ndinofunga kuti zvichava zvakanaka.
Ndinotenda nekuda kwekubatsira chero zvakadaro.
Time chokusika peji: 0.548 mumasekonzi